I-FSX iyaqhekeka xa isebenza ngeWindows XP / Vista / 7 / 8 / 10-64 kwiintambo zeenqwelo-moya kunye nee-MP Sessions. Ngaba kukho ukulungiswa? - Rikoooo
FSX ukuba agubungele xa ibaleka Windows XP / Vista / 7 / 8 / 10-64 zibhabha simahla MP eengxoxo. Ingaba kukho sisombululo?
Umba Iqinisekile ngamanqwanqwa amabini lula:
Inyathelo 1: UmxokozeloUIAutomationCore.dll
Inyathelo 2: Yothula ifayile ZIP athabathe UIAutomationCore.dll acatshulwe kwi ingcambu ulawulo lwakho ufakelo FSX apho fsx.exe ifayile ahlala khona. Qiniseka FSX ayisebenzi.
Emva ngale ntshukumo, qala FSX yaye uya kufumanisa ukuba ifaka neyawo FSX, akusekho ekugqibeleni ebangela FSX kubetheka.
Ngaphandle esi sisombululo, FSX akuxhome ngokunjalo uya 'siphelelwe lixesha' umdlali yeeseshini ezininzi. Musa ukusebenzisa nayiphi kwezinye iinguqulelo UIAutomationCore.dll, kuba olu guqulelo luguqulelo kuphela Ndoluphelisa nezinobuzaza.